RW Rooble oo buriyey natiijada is doorashadii guddiyada SL | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay Guddiga doorashooyinka Xildhibaannada labada gole ee Gobollada Waqooyi, ayaa sheegay in laga laabtay guud ahaan doorashooyinkii is barbar socday ee labada daraf ku kala doorteen hoggaanka guddiga.
Sida uu sheegay Rooble, Xafiiska Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha, ayaa soo gudbin doona xilliga iyo goobta ku habboon ee lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobollada Waqooyi, (Soomaaliland).
Xubnaha guddiga wuxuu ku boorriyay in ay ka madax banaanaadaan siyaasadda iyo aragtida darafyada isku maaan dhaafsan siyaasadda, ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta ay doorashadooda hagayaan.
RW Rooble, wuxuu hoota ka xaqriiqay in masuuliyadda koowaad ee hufnaanta iyo la xisaabtanka guddiyada doorashooyinka ay isaga saaran tahay, wuxuuna guddiga uga digay, wax is daba marin iyo la kala safasho labada dhinac.
“Waxaad ku dhisan tihiin xeer Ra’iisul Wasaare, sidaas daraadeed waxaa idin la xisaabtami kara waa Ra’iisul Wasaaraha iyo Madasha wadatashiga Qaranka oo ah Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, oo ka masuul ah geedi socdka doorashada dadban ee dalka”. Ayuu yiri RW Rooble.
Ra’iisul Wasaare Roble, wuxuu hore kulammo ula qaatay hoggaanka guddiyada doorashooyinka Gobollada Waqooyi ee Soomaaliland, oo ay kala hoggaaminayaan Guddoomiyaha Aqalka Sare ee waqtigiisu dhamaaday Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Khadar.